संवाद – Page3– SamajKhabar.com
कांग्रेसको १३ औं महाअधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्छ
बद्री पाण्डे युवा नेता, नेपाली कांग्रेस कांग्रेसको १३ औं महाअधिवेशन कत्तिको लागेको छ ? १५ गतेदेखि गाउँ÷नगर अधिवेशन भइसकेको छ । अब माघ २२ गते क्षेत्रीय अधिवेशन र २५ गते जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ । नेताहरू संसद्को कामकारबाही थाँती राखेरै भए पनि जिल्लातिर गइसक्नुभएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक अब जिल्ला....पुरा पढ्नुहोस
कोइराला भएर नेता भएको होइन, कार्यकर्ताले भोट हालेका छन्
कांग्रेस महाधिवेशन आयो, तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? अधिवेशनको लागि पार्टीले विभिन्न तहबाट तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । विभिन्न समितिमार्फत ती तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । जस्तो विधान समिति छ, नीति, व्यवस्थापन समितिहरू छ, त्यसका संयोजकहरू तोकिएका छन् । विस्तारै काम भइरहेको छ । [caption id="attachment_21730" align="alignright" width="300"]....पुरा पढ्नुहोस
‘साँठगाँठको राजनीति मलाई मन पर्दैन’
पार्टीको १३ औं महाधिवेशन नजिकिइरहेका बेला तपाईं देश दौडाहा गरिरहनुभएको छ । देश दौडाहा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार हुनका लागि हो ? संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रचार गर्न तथा सद्भाव र एकताको राष्ट्रिय अभियान लिएर देश दौडाहामा गएको हुँ । सातवटै प्रदेशका जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिलाई राखेर प्रशिक्षण....पुरा पढ्नुहोस
‘भल्गारिटी बढ्नुमा नायिकाको मात्रै दोष छैन’
चितवनकी प्रमिला खनालले कम उमेरमै कला क्षेत्रमा निकै सफलता पाइसकेकी छिन् । पेशाले नृत्यांगाना खनाल नेपालमा जुम्बा डान्सरका रुपमा चिरपरिचित छिन् । यति मात्र नभएर उनी आफुलाई नेपालको पहिलो बेली डान्सर भएको दावी पनि गर्छिन् । चलचित्र ‘अझै पनि’ मा सह–नायिकाको रुपमा अभिनय गरेकी प्रमिलासंग गरिएको....पुरा पढ्नुहोस
मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ सभासद्मा गीता वाग्ले पनि परिन्। उनलाई नेपाली कांगे्रसले आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति गरेको हो। पारिवारिक कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भए पनि आफूलाई बीपी कोइरालाको अनुयायी ठान्छिन् उनी। धर्मभीरु वाग्लेले राजनीतिभन्दा पनि परोपकार र समाजसेवामा नाम कमाएकी छन्। ११ वर्ष शिक्षण....पुरा पढ्नुहोस
अब पुरानो पार्टी काम छैन : टोपबहादुर
० एमाओवादीभित्र देखिएको विवादले पार्टी विभाजनको संकेत गरेको हो ? – अन्तर्विरोधलाई हामी जीवन ठान्दछौं । अन्तर्विरोधले नै विचार, कार्यदिशा र आन्दोलनको विकास गर्छ । हामीबीच जुन विवाद देखिएको छ, यो कुनै नौलो होइन । यसले हामीलाई विभाजनतर्फ होइन कि विचार र विधिको विकास गर्छ । ० नयाँ शक्ति भनेको के हो ? –....पुरा पढ्नुहोस
अब सबै उ हुन्छ : सुशील कोइराला
(गाईजात्रे अन्तर्वार्ता) प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य कस्तो छ अहिले ? हेल्थ एकदम तोतल्ली… तोतल्ली फित एन्ड फाइन छ (ख्वाङ… ख्वाङ…ख्वाङ…) । यो खोकीले चैँ साह्रै दु:ख दिइरा’छ । फेरि दुई–चार दिनदेखि जरो आएर ओछ्यानबाट उठ्नै सकेको छैन । पेट पनि ठीक छैन किन हो । तर, हेर्नुस् अमेरिकाबाट फर्केपछि आई एम तोतल्ली....पुरा पढ्नुहोस
जबज कुनै धर्मग्रन्थ होइन : योगेश भट्टराई
[caption id="attachment_17454" align="alignright" width="205"] योगेश भट्टराई,केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले[/caption] नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा योगेश भट्टराई केन्द्रीय सचिव पदका आकांक्षी हुन । अनेरास्ववियुको पूर्व अध्यक्ष हुदै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसक्नुभएका भट्टराई बौद्धिक युवा राजनीतिज्ञका रुपमा चर्चामा हुनुहुन्छ । एमालेको....पुरा पढ्नुहोस
‘सुचीको आगमन नेपालका लागि सौभाग्य हो’
[caption id="attachment_17214" align="alignright" width="300"] हरिबोल भट्टराई,अध्यक्ष, विपी चिन्तन प्रतिष्ठान[/caption] हरिबोल भट्टराई, विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको शतवार्षिकीका अवसरमा प्रतिष्ठानले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानकै आयोजनामा काठमाडौंमा हुन लागेको....पुरा पढ्नुहोस
नेपाली दैनिक पत्रिकाको पहिलो सम्पादक…
गोविन्द मल्ल गोठालेको जिवनी ऋद्धिबहादुर मल्लले कुनैबेला नेपाली भाषासाहित्यमा एकछत्रले आफ्नो हैसियत देखाएका थिए । तिनै मल्लका सन्तानहरु पनि नेपाली साहित्यका महारथीमा स्थापित भए । गोविन्दबहादुर मल्ल 'गोठाले' र विजयबहादुर मल्लले हातमालो गरेर नै नेपाली भाषासाहित्यका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण....पुरा पढ्नुहोस